Public Health in Myanmar: HIV vaccine
"ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသူတွေထဲမှာ ၅၁ ဦး ခုခံကျ ရောဂါ ရလာပြီး ကာကွယ်ဆေး ထိုးမထားသူတွေထဲမှာ ၇၄ ဦး ရောဂါရပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုမှာ ပါဝင်တဲ့ လူဦးရေ အတိအကျနဲ့ ပါဝင်တဲ့ အချိန်တွေ ထည့်တွက်လိုက်တော့ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်မှု ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။"
အဲဒါ ethical လို့ ပြောနိုင်လား?
"ခုခံကျရောဂါ မရှိတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၃၀ အတွင်း ထိုင်းလူမျိုး ကျား-မ စုစုပေါင်း ၁၆၀၀၀ ကျော်ကို စမ်းသပ်ထားပါတယ်။ "
ရောဂါပိုးရှိပြီးသား သူတွေကို စမ်းတာလား?
ပြန်မေးရဦးမယ် ethical မဖြစ်ဘူးလို့ ဘယ်လို အကြောင်းနဲ့ ပြောမလဲ။
စမ်းသပ်ချက်မှာ စပြီး ပါစဉ်တုန်းကတော့ ပါဝင်သူတွေအားလုံး ဘယ်သူမှ ခုခံကျရောဂါ မရှိကြပါ။
ဒါက ရပြီးရင် ပြန်ပျောက်အောင် ကုလို့ရတဲ့ ရောဂါမှ မဟုတ်တာ။
ကမ္ဘာတ၀ှမ်း လူပေါင်း ၃၃ သန်း ကူးစက်ခံနေရတဲ့ HIV အတွက် မီဒီယာ ကနေ Breakthrough တခုလို့ ပြောကြတယ်။ သုတေသနအရဆိုရင် ဟုတ်မှာပါ။
ဒီ HIV ကာကွယ်ဆေးဟာ ရောဂါကူးစက်စေမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ကြောင်း ပဌမဆုံးအကြိမ် စမ်းသပ်တွေ့ရှိရတာ ဟုတ်ပါသတဲ့။ တမျိုးထဲပေးရင် မထူးတဲ့ လက်ဟောင်း ကာကွယ်ဆေး နှစ်မျိုးတွဲကို ဒေသ ၂ ခုက ထိုင်းလူမျိုး လူ ၁၆၃၉၅ ဦးကို ထိုင်းအစိုးရနှင့် အမေရိကန်စစ်တပ်တို့ ပူးတွဲပြီး၊ စမ်းသပ်ခဲ့ခြင်းဟာ အများဆုံး သုတေသန ဖြစ်ပါတယ်။ HIV ပိုးမရှိတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၃၀ နှစ်ရှိသူတွေကို ၇ နှစ်တာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းပါ။ စမ်းသပ်ခံသူတွေကို ၆ လ ၁ ခါ၊ ၃ နှစ်ကြာ စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။
ဆရာ တက္ကသိုလ် လှမွန် ပြောတာကို ထောက်ခံတယ်။ အဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်။ ကိန်းဂဏန်းအရာတော့ ၃၁့၂% လျော့နည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး မထိုးသူတွေထဲက ၇၄ ဦး ကို ကူးစက်ပြီး၊ ထိုးသူ ၅၁ ဦး ကူးစက်ကြောင်း တွေ့ရတာဖြစ်လို့ မလွမ်းလောက်သေးဘူး ထင်ပါတယ်။
စမ်းခဲ့တာက ဗိုင်းရပ်မျိုးခွဲ B နှင့် E တို့ဖြစ်လို့၊ အာဖရိကမှာ အဖြစ်များတဲ့ C မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ဘာမျိုးခွဲတွေရှိလဲ မသိပါ။ သုတေသနဆိုတာ ဗမာပြည်မှာ အတော်ကြီး-အတော်ကြီး လိုနေတယ် ထင်တယ်။
ဟိုခေတ်တုံးက ကမ္ဘာမှာ ဆန်အတင်ပို့ဆုံး တိုင်းပြည် ဖြစ်ချိန်မှာ ဆန်သုတေသနကို လက်မခံခဲ့လို့ ဖိလစ်ပိုင် ကို ရောက်သွားရတယ်။ အကျိုးရလဒ်ကတော့ ကနေ့ ဗမာ့ဆန်ကို ၀ယ်သူမရှိဖြစ်သွားရော။
စမ်းသပ်ချက်မှာ စပြီးပါစဉ်တုန်းက “ရောဂါပိုး” မရှိကြပါဘူး လို့ ပြောရင် ပိုပြီး တိကျပါလိမ့်မယ်။ ပို့စ်ထဲမှာလည်း ပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။
ကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီဆုံးသုတေသနကိုရှာမတွေ့ နိုင်ကြလို့ နှစ် ၂၀ ကျော် ကာကွယ်ရာ ဆေးနိတ္ထ၊ ကုရာဆေးနိတ္တရောဂါကို လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ကြရတာပါ။ ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီရင် ဆက်လုပ်ခွင့်ကိုမရပါဘူး။
“ကာကွယ်ဆေး အစစ် ရထားလို့ ဆိုပြီး အပြင်မှာ သွားကဲချင်တိုင်း ကဲနေတာမျိုး၊ ကာကွယ်ဆေး အတု ရထားလို့ဆိုပြီး စမ်းသပ်ကာလအတွင်း ဥပုသ်စောင့်နေတာမျိုး လုပ်နေကြရင် စမ်းသပ်မှု အဖြေထုတ်ရာမှာ ထိခိုက်နိုင်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် စမ်းသပ်မှုမှာ ပါဝင်သူတွေဟာ နေရိုးနေစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်ပြီးနေနေကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။” ဆိုတော့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ ငြိမယ်ဆိုရင် နေရိုးနေစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်ပြီးနေနေကြဖို့ ကို ဆေးဆရာတစ်ယောက်က ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဟာ သူဖြစ်ချင်တာဖြစ် ကိုယ့်သုတေသနအောင်မြင်ရင်ပြီးရော ဆိုသလိုမို့ “လူ့ ကျင့်ဝတ်” နဲ့ တော့သိပ်မကိုက်လှဘူးလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ သုတေသနကျင့်ဝတ်တော့ လွတ်နိုင်ပါတယ်။ သုတေသနကြောင့်သူတို့ ရောဂါရတာမဟုတ်လို့ ပါ။
နောက်တစ်ခုက ဆေးရဲ့ ကာကွယ်နိုင်မှုကလည်း သိပ်တော့မလွမ်းလောက်တဲ့နောက်တစ်ချက်က ဘယ်သူတွေက ဆေးထိုးပြီးနောက်ကဲနေကြပြီး၊ ဘယ်သူတွေက ဥပုသ်ဆောက်နေကြလဲဆိုတာတွေထိ လိုက်ကြည့်နေကြတာမျိုးမဟုတ်ရင်တော့ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အနေအထိုင်ကြောင့်ပဲ “ရောဂါရခြင်း၊မရခြင်း” ကိုဖြစ်စေပြီး ဆေးကတော့ ဘာမှကို မလုပ်နိုင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမလားပဲ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲ ဆရာတို့ ရေးထားတာကိုဖတ်ရသလောက်ကို မြင်ကြည့်မိတာပါ။
Research လုပ်တာက သီးသန့်၊ Health Education လုပ်တာက သီးသန့်ဆိုတော့ ကျွန်မအနေနဲ့တော့ ဒီ Research အတွက် Sample ယူရာမှာ Paticipant တွေရဲ့ ဆန္ဒပါပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်သာ လုပ်ရတာဖြစ်လို့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ မကိုက်ညီလို့ သဘောထားရလောက်တဲ့အကြောင်း ရှိမယ်မထင်ဘူး။ ပြီးတော့ Research တခု လုပ်ဖို့အတွက် Sample ယူတဲ့အခါမှာ ခုနက Yu Wa yi ထည့်ပြောတဲ့ အချက်တွေကို Experiment error (Type 1 and Type 2) နှင့် Experiment bias ဆိုတဲ့ လွဲချော်နိုင်တဲ့ အချက်တွေကို အဲဒီထဲမှာ ထည့်တွက်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Research ရဲ့သဘောအရ ပို့စ်ထဲမှာ ပါတဲ့ အားလုံးတွက်ချက်ပြီး ရလာတဲ့ အဖြေဆိုတာ ဒါတွေ အကုန်လုံး နှုတ်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို Sample အမျိုးအစား ဆိုတာ မသိလို့ Population ကို ကိုယ်စားပြုမှု ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ မရပေမယ့် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာဟာ အနီးစပ်ဆုံး တိကျမှုကို ယူထားပြီးသားဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
'Study volunteers received counseling on how to prevent becoming infected with HIV at the beginning of the study and every six months (pre-test and post-test counseling) after the start of the trial, foratotal of three andahalf years.'
ဒီ စမ်းသပ်မှုမှာ ပါဝင်သူများဟာ counseling အကြိမ်ကြိမ် ပေးခြင်းခံရတဲ့ အတွက် ethical မဖြစ်ဘူးလို့ပြောစရာမရှိဘူးလို့မြင်ပါတယ်။ counseling ရသော်လည်း ကူးစက်နိုင်မယ့် အပြုအမူတွေ ဆက်လုပ်နေသူများ၊ မပြောင်းနိုင်သူများသာ ပိုးကူးစက်ခြင်းခံသွားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Link ပေးထားတဲ့ referencesတွေကို ဖတ်ကြည့်ရင် ပိုရှင်းသွားမှာပါ။
ကျေးဇူးပါ Nge Naing နဲ့ EEK. အခုမှရှင်းသွားတော့တယ်။
ဆောရီး။ ကျွန်မရဲ့ မှတ်ချက်မှာ “နတ္ထိ” တွေရေးတာ။ အခုမှကြည့်မိတယ်။ နိတ္တိ မဟုတ်။